Zanu PF Yotarisirwa Kudoma Vatevedzeri veMutungamiri weBato neNyika kuKongiresi
Bato reZanu PF rinoti richadoma vatevedzeri vemutungamiri webato pamwe nenyika kumusangano mukuru wekongiresi uri kuitwa mwedzi uno.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Doctor Takavafira Zhou, vanoti vanoona sekunge musangano mukuru uyu uchadoma vanhu vane nhoroondo yechiuto sevatevedzeri vemutungamiri wenyika.
Doctor Zhou vanoti kana bato iri rakatevedzera nhoroondo yemubatanidzwa wepamto eZanu PF nePF Zapu, vanoona pachisarudzwa mumwe mutevedzeri anobva kuPF Zapu pakati paVaDumis Dabengwa, VaKembo Mohadi kana VaAmbrose Mutinhiri.
Vanoti kunyange hazvo vaDabengwa vakabuda muZanu PF, vanogona kudzorwa naVaMnangagwa senzira yekusimbisa hukama pakati pevaive varwi vehondo yerusunguko vanobva kumapato maviri aya.
Asi Doctor Zhou vanotiwo kana bato iri rakada kudzokera kuzvisungo zva2014, panogona kudomwa munhkadzi semumwe wevatevedzeri, kunyange hazvo pasina vane nhoroondo yakakura yeChimurenga kubva kuPF Zapu vasara mubato iri.
Vatungamiri vachasharwa ava vachange vachitsiva VaMnangagwa, avo vakanga vadzingwa mubato reZanu PF, pamwechete naVaPhelekezela Mphoko, avo vakabviswa pachigaro nehurumende itsva yaVaMnangagwa.